जुलीः अनुभव र अनूभुति | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
म सिराहमा जन्मिए । शिवकान्त कर्ण र पुष्पा सिन्हाको जेठी छोरीका रुपमा । सानैदेखि सिधा सरल तर चुलबुले थिए । तीन दिदी बहिनी थियौ । संगै खेल्थ्यौ । एउटै उमेर समूहका भएकाले असाध्यै मिल्थ्यौ । जताजाँदा पनि संगै हुन्थ्यौ । रमाइलै बित्यो बाल्यकाल । न कुनै कुराको चिन्ता न कुनै कुराको डर ! खासै जिम्मेवारी केही नभएकाले लेख्ने, पढ्ने र खेल्ने काममै रमाउथे ।
अन्नी र प्रकृति मेरा ती प्यारी बहिनीहरु । यिनीहरु बिना म आफ्नो अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्दिन । साह्रै प्यारा र सहयोगी छन् दुवै । मेरो पिर अप्ठ्यारो सबैभन्दा पहिला तिनीहरुलाई नै भन्छु । उनीहरुले सकेको सहयोग र आत्मियता दिन्छन् ।
बुवा राष्ट्रिय जिागिरे भएकाले उहाँको सरुवा जहाँजहाँ हुन्थ्यो । हामी त्यही पुग्थ्यौ । रसुवा, चितवन, खप्तड पनि पुगेका थियौ । यसरी जाँदा धेरै कुरा जान्ने सिक्ने अवसर मिल्यो । वातावरण र प्रकृतिको राम्रो शिक्षा सानैमा पाइयो । पछि बुवाले राजविराजमा जग्गा किनेर घर बनाएपछि मात्र स्थायी रुपमा बस्ने मेसो मिल्यो ।
विद्यालयमा साह्रै ज्ञानी विद्यार्थीको रुपमा चिनिन्थे । चुपचाप शान्त बस्न मनपराउने, कसैले खाजा खोसेर खादा पनि कुनै सिकायत नगर्ने लजालु स्वभाव, छिटो कोहिसंग घुलमिल नहुने भएकाले गम्भिर प्रकृतिकी थिए । यदाकदा स्कूलमा हुने कार्यक्रममा भाग लिन्थे । नृत्यमा रुचि थियो । प्राय एक्लै नाच्थे । परिवारले प्रोत्साहित नगरेकाले भएको प्रतिमा त्यतिकै हरायो । खेलकुद, पिकनिक र विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी बनेरै बाल्यकाल सकियो ।
एस.एल.सी उत्तिर्ण गरेपछि क्याम्पस पढ्ने योजना बनाउँदै थिए । मेरो विवाहको कुरा उठ्न थाल्यो ।केटाहरु मलाई माग्न आउन थाले । बुवाआमाले छोरी सानै छ भन्दै कसैको प्रस्ताव पनि स्वीकार गर्नुभएन । म चाहि प्रतिक्रिया विहिन । एस.एल.सी.को नतिजा आएको थिएन । बुवाले मलाई घुमाउन कोशी टप्पु लग्नुभएको थियो । त्यही भेट भयो, विराटनगरका शैलेन्द्र प्याकुरेलसँग । उनले मलाई मनपराए । डि.एफोे कर्णकी छोरी भन्ने पत्तो लगाएर सिधै भेट्न आए । पहिलो भेटमै विवाहको प्रस्ताव राखे । कसैको प्रस्तावमा नपग्लिएको कर्ण परिवार शैलेन्द्रको प्रस्तावमा पग्लियो । अन्ततः हाम्रो विवाह भयो । दोश्रो घुम्ती
हाम्रो अन्तरजातिय विवाह भएकोले प्रारम्भममा त्यति राम्रो भएन । विवाहप्रति प्याकुरेल खानदान असहमत थियो । मैले छोएको सासु ससुराले खानुभएन । हामी बुढाबुढी विराटनगरबाट सिराहा गएर बस्न थाल्यौ । त्यहाँ हाम्रो पुख्यौली जमिनदारी थियो । श्रीमान् त्यही जमिनदारी चलाउन थाले म घर गृहस्थी ।
पुरानो सोचका सासुु ससुरा बुहारीले पढेको भन्दा पनि घरधन्दा गरेको मनपराउने त्यसमाथी श्रीमान्ले पनि पढाउन नचाहे पछि पढ्ने लेख्ने कुरा सबै बन्द । तर म भित्र एउटा बेग्लै प्रकारको खुबी थियो । केही त गर्नैैपर्छ भन्ने सोच मनमा बलियोसँग आयो । सौन्दर्यको बेसिक कोर्स गरे । घरधन्दा भ्याएर यसो फुर्सद निकालेर पार्लर टे«निङ गरे । जीवनका सात वसन्त सिरहामै विताए ।
सासुआमा बिरामी भएको खबर आयो । भेट्न गए । जीवनको अन्तिम अवस्थामा सासु आमाले विराटनगरमै बस भन्नुभयो । सायद यहि कुरो भन्न उहाँको प्राण अड्किएको रहेछ । यसको दुई तिन दिनमै बित्नु भयो । हामी विराटनगर आएर ससुरा बासँग बस्न थाल्यौ । छोरी सानै थिइन् । पेटमा बाबु थियो । सबै कुराको तालमेल मिलाउदै आफ्नो कामहरु गरिनैरहे ।सम्झिँदा पनि अचम्म लाग्छ त्यो सबलाई कसरी पार लगाए ? तुलनात्मक रुपमा मेरो जीवनको पहिलो घुम्ति भन्दा दोश्रो घुम्ती ज्यादै कठिन थियो । बच्चाहरु हुर्काउदै वृद्ध ससुराको स्याहार गर्दै र घर व्यवहार गरेर सौन्दर्य तालिम गर्न पनि भ्याए । जहाँ इच्छा त्यहा उपाय भन्ने कुरालाई राम्रंैसँग जीवनमा चरितार्थ गरी छाडे ।
मेरो संसार भन्नु नै मेरो परिवार हो । सानो र सुखी परिवार छ । हामी दुई र हाम्रा दुई । छोरी स्वीकृति र छोरा स्वीकृत टिनएज मै जन्मिए । साथी जस्तै छन् । हामी आमाछोरीको मित्रता गहिरो छ। छोरा अलि सानो छ तर सबैको दिलको टुक्रा बेनेको छ । छोराछोरी र मेरो सम्बन्ध परिस्थिति अनुसार फेरिन्छ । सल्लाह लिनु छ भने साथीजस्तो बन्छु । सल्लाह दिनु छ भने अभिभावक बन्छु । उनीहरुको रुचि अनुसार चल्न दिएको छु । उनीहरुको चित्त दुखाउनै सक्दिन । हामी पति पत्नी पनि आ–आफ्नै काममा रमाएका छौ । कुनै पनि काममा श्रीमान्को रोकावट छैन ।
मानिसले सबैभन्दा बढि चाहना राख्ने विषय नै सौन्दर्य हो । मानिसको जीवनमा रंग भर्ने काम पनि सौन्दर्यले नै गर्छ । सौन्दर्य एउटा अजय शक्ति हो । जसले जतिसुकै शक्तिशाली महापुरुषलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छ । सौन्दर्यका अनेकौ शाखा छन् । बाहिरी सौन्दर्य र भित्री सौन्दर्यमध्ये पनि साधारण लौकिक जीवनमा बाहिरी सौन्दर्यले बढि महत्व पाउँछ ।
सानै उमेरदेखि सबको मुखबाट ‘यो जुली राम्री छ’ भन्ने सुन्दै आएकी थिए । यो सुन्दा अझ राम्री भएर बस्ने र हिड्न जाँगर पनि चल्थ्यो । मेकअपमा सजिएर हिड्न रुचाउथे । उमेर बढ्दै गएपनि मेरो सौन्दर्यको चर्चा सेलाएन । आफू पनि राम्रो बन्न पाइने अरुलाई पनि राम्रो बनाउन पाइने भएकाले सौन्दर्य व्यवसाय रोजे । एउटा सानो पार्लर खोलेर काम सुरु गरे । पछि काइलो जेठानी र जेठाजुले ठूलै पार्लर खोलेर काम गर्ने सल्लाह दिनुभयो । आवश्यक सहयोग पनि गर्ने वचन दिनुभयो । राम्रैसंग ठूलै पार्लर गर्ने भएपछि तयारी पनि राम्रै गर्नुप¥यो भनेर दिल्ली गए । स्क्रीन, हेयर ट्रिटमेन्ट र अन्य आवश्यक कुरामा डिप्लोमा गरे । सबै कोर्स सकेर विराटनगर फर्किए र लगत्तै पार्लर खोले एल्पस नामबाट ब्युटिपार्लर खोले । जुन अहिलेसम्म संचालन गर्दै आएको छु । १० वर्ष पुगिसक्यो । सयौंलाई आफूजस्तै सौन्दर्यकर्मी बनाइसके । यसमै रमाएको छु । आफ्नै खुट्टामा उभिएर अरुलाई पनि आत्मनिर्भर बनाएको छु ।
यहि कर्मले मलाई सक्षम बनाएको छ । जीवनका धेरै उकाली ओरालीहरु पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छु । नाम इज्जत र थोरै धन पनि जोड्न सौन्दर्य व्यवसायले ठूलो टेवा दिएको छ । अब आउने दिनमा पनि यहि कर्ममा सक्रिय रहेर केही नौलो सम्झनायोग्य काम गर्ने उद्देश्य बोकेको छु ।
कसलाई कति बेला सर्छ थाहै नहुने अनि जति ग¥यो उति गरौं गरौं लाग्ने प्रेमप्रति मेरो पनि राम्रै झुकाव थियो । कोही मायालाई सम्बन्धको बन्धनसित दाँज्छन् भने कोही अनुभूति मात्र भन्छन् तर म मायालाई ‘शाश्वत चिज’ मान्छु । जो कहिल्यै मर्दैन । मायाको जन्म स्वतन्त्र भूमिमा हुन्छ । जहाँ कुनै बन्धन, जर्बजस्ती अथवा कानुन हुँदैन । प्रेम व्यक्तिको आत्मदान हो । जहाँ कुनै विवशता वा बाध्यता हुँदैन । साँचो प्रेम मौन हुन्छ र व्यवहारमा मात्र झल्किन्छ ।
परिवारको कठोर अनुशासनमा रहेकाले मैले कसैलाई प्रेम गर्ने हिम्मत गर्न सकिन । प्रायः सँगै पढ्ने केटाहरुले प्रेमको प्रस्ताव नराखेका पनि होइनन् तर घरको अनुशासन र मर्यादा नाग्न मन लागेन ।
नेपाली समाजमा अहिले पनि ९० प्रतिशन मागी विवाह नै गर्ने प्रचलन छ । यस्तो वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु अघि विपरित लिंगी साथीसित परिचय नै हँदैन । न त माया नै तर वैवाहिक सूत्रमा बाँधिने वित्तिकै पहिला सुरु हुन्छ यौन । यही यौन सम्बन्धले विस्तारै दम्पतीका बीच माया बढाउँदै जान्छ । आपसी सम्झौता र विश्वासमा आधारित यौन र मायाको यो रुप जीवनपर्यन्त चलिरहन्छ । यौन र मायाको यो सम्बन्धमा व्यक्ति आफ्नो खुशीभन्दा पनि सामाजिक बन्धन र मर्यादाप्रति बढि सचेत रहेको देखिन्छ । यो कुरा मेरो जीवन भोगाई पनि हो ।
पूर्विय दर्शन अनुसार जीवन संचालन गरिरहेका हामी यौन भन्ने शब्दसँग केही बढि झस्कन्छौ । शब्द सुन्दैमा जिब्रो काढ्ने र तर्सिने हामीहरुले यसका बारे छलफल गर्नु त धेरै टाढाको कुरा हो । जब माध्यमिक तहको स्वास्थ्य शिक्षा अन्तर्गत प्रजनन प्रणाली भन्ने पाठ आउँथ्यो, तब कक्षामा केटाहरु रातापिरा हुन्थ्ये, केटीहरु हेडडाउन गर्थे । आधाभन्दा बढि केटीहरु त लाजकै कारण अनुपस्थित हुन्थे । म भने लाज मानी मानी भए पनि कक्षामा उपस्थित हुन्थे । हेड डाउन गरेरै भए पनि शिक्षकले पढाएको कुरा सुन्थे । त्यही कक्षाबाट सबैभन्दा पहिला यौन र प्रजनन क्रियाबारे चाल पाएकी थिए ।
जसरी स्वास्थ्य सुन्दर रोगरहित बनाउन सन्तुलित भोजन, पूर्णनिद्रा चिन्तामुक्त मस्तिष्क चाहिन्छ । जसरी खाना निद्रा मान्छेको जैविक आवश्यकता हो, त्यसरी नै यौन पनि मान्छेको जैविक आवश्यकता भित्र पर्ने अहम आवश्यकता मध्ये एक हो । मान्छेलाई सफल बनाउँछ प्रेमले र प्रेमलाई अझ सफल बनाउँछ यौनले । यौन शरिरको यस्तो आवश्यकता हो जसलाई छोड्नै सकिदैन जससँग जित्नै सकिदैन । यसप्रति समर्पण हुनैपर्छ । सफल जिन्दगी व्यतित गर्नको लागि यौन सन्तुष्टी आवश्यक पर्छ ।
नेपालमा ४० प्रशितभन्दा बढि किशोरीहरुको विवाह १८ वर्ष पुग्नु अगावै हुन्छ । यसको भुक्तभोेगी म पनि हुँ । यहि कारण पूर्ण शारिरिक र मानसिक विकास हुन नपाउँदै उनीहरु यौन कार्यमा होमिन बाध्य हुन्छन् । म पनि बाध्य भएकी थिए ।यहि कारण यौनक्रिया मेरा लागि वरदान नभइ अभिसाप अनि सुखानूभुति भन्दा बढि पिडाको अनुभूति भएको थियो । कम उमेरमा विवाह र अनिच्छित यौन सम्पर्क राख्नु युवावस्था को मिठो अनुभव होइन बरु कोमल बचपनबाट एकैचोटी वयस्क
जिम्मेवारीमा होमिनु हो । अपरिपक्वताको कारण पहिलो यौनक्रिया अनुभव सुखद रहेन । उमेर, सोच र ज्ञानको कमीले मीठो र आनन्ददायी अनुभव गर्न सकिएन ।
१६, १७ वर्षकै उमेरमा यौन क्रियाकलापमा सरिक हुनुपरेकाले पहिले असहज भएको यौन विस्तारै सहज बन्दै गयो । बुभ्mदै पनि गए । एउटा यस्तो अवस्था पनि आयो जुन बेला श्रीमान्लाईभन्दा मलाई यो प्रति रुचि बढ्दै गयो । श्रीमान्भन्दा म सक्रिय हुन थाले । बच्चाबच्चीको जाय जन्म भएपछि त अझ मज्जा लिन थाले । यौनका सबै आसनको ज्ञान नभए पनि केही आशनको अनुभव लिएकी छु । उमेर बढ्दै गएपछि विस्तारै यसको ज्ञान पनि बढ्दै जाँदो रहेछ । मैले अनुभव गरेका विविध आसनमध्ये मलाई चाहिँ पति पत्नी दुवैले एकअर्कालाई हेरेर गर्न सकिने आसन नै मनपर्छ । यसमै रमाइलो अनुभव गरेकी छु मैले । यौन रमाइलो हुन्छ भनेर शारिरिक रुपमा अप्ठ्यारा आसनमा मेरो रुचि छैन । यौनकै कारणले पतिपत्नि बिचमा राम्रो सम्बन्ध विकास गर्छ । तनाव, थकान, मेटाउने भएकाले पनि म यसमा पूर्ण इमानदार भएर सक्रिय हुन्छु । म प्राकृतिक निरोधमा विश्वास राख्छु । त्यही विधिबाट गर्भनिरोध गर्दै आएको छु । यदि यसमा निरसता आए सम्बन्धमा पनि चिसोपना बढ्छ । आफ्नो चाहना, सुविधा र क्षमता अनुसार यसमा संलग्न हुनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
समय जतिसुकै आधुनिक हुँदै गएको किन नहोस् यौनसम्बन्धी कुरालाई समाजले अझै पनि खुला रुपले आत्मसात गर्न सकेको देखिदैन । विशेषगरी जब महिलाले आफ्नो यौन इच्छालाई व्यक्त गर्छिन तब उनलाई गलत दृष्टिकोणले हेरिन्छ । बदलिदो समाजिक परिस्थिति, सूचना एवं सञ्चार क्षेत्रको विकासले गर्दा नारी पुरुष दुवै तुलनात्मक रुपमा धेरै कुरामा अगाडी आएका छन् । समयले यौन साथी फेर्ने परिस्थितिमा पनि कतिपयलाई पु¥याएको छ। विकल्पै नभएको अवस्थामा अर्कै कुरा हो तर यौन क्रिया आफ्नै मान्छेसँग मात्रै उत्तम हो । अधिकांश महिला यौन इच्छा भए पनि नभए पनि आफ्ना श्रीमान्प्रति लगाव राख्छन् ।
किशोर किशोरीहरुलाई विवाहपूर्व यौनसम्पर्क नराख्न हामिले सचेत गराए पनि यो उनीहरुको नितान्त व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो । तसर्थ उनीहरुको अधिकार हनन हुने काम गर्नुभन्दा यौन तथा प्रजनन् व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउनु उपयुक्त हुन्छ जसका लागि उनीहरुलाई यससम्बन्धी पूर्ण परामर्श र सूचना दिनुपर्छ । सबै कुरा बुझेर सोचेर १८ वर्ष पुगेपछि यौनजीवनमा प्रवेश गुर्न राम्रो ।
महिलाहरु जति भावुक हुन्छन त्यति नै आफ्नो श्रीमान् वा प्रेमीप्रति नरम हुन्छन् । यौनक्रियामा कुनै आनन्दको अनूभूति नभए पनि उनीहरु आफू पूर्णरुपले तृप्त भैसकेको दर्शाउने प्रयास गर्छिन् । नारीलाई यौनक्रियामा तब अतृप्ति महसुस हुन्छ जब उनका श्रीमान् वा प्रेमी उनीप्रति संवेदनशील हुँदैनन् । आफ्नी श्रीमती वा प्रेमिकालाई यौन फिलिङ्गस जगाउने प्रत्यत्न नै गर्दैनन् पुरुषहरु । तैपनि महिलाहरु आफूमा फिलिङ्ग ल्याउने कोसिस गर्छन् । मेरो सवालमा जब मेरो श्रीमान् मेरा सामु आएर मिठा मिठा कुरा गर्न थाल्छन् । माया दर्शाउन थाल्छन् । यता उति स्पर्श गरेर कुरा गर्न थाल्छन् । तब मलाई हल्का फिलिङ्गस आउँछ । अझ विस्तारै उनले आफ्नो अंगालोमा कस्न थाल्छन् तब फिलिङ्गसको मात्र बढेर आउँछ । उनीजति सक्रिय हुँदै जान्छन् म त्यतिकै आनिन्दत हुन्छु । तन बुढोहुँदै गए पनि मन बुढो हुँदैन । जीवन रहेसम्म कुनै न कुनै रुपमा यौन रहिरहन्छ । सक्रिय जीवनको त यो एउटा अंग नै भयो । शरिरले साथ दिएसम्म यौन आनन्द लिन छोड्नु हुँदैन ।
वास्तवमा यौन सृष्टि संचालनको मूल आधार हो । धर्मकर्मले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ । समय अनुसार निश्चित अवस्थामा गरिने यौनले मात्र मानिसलाई जीवन्तता दिन्छ । म त भाग्यमानी नारी भित्रै पर्छु किनकी यौनको मामलामा मैले कुनै गलत कदम उठाउनै परेन । एउटै पार्टनरसंग रमाउन पाए । यसको उचित प्रयोग मैले जीवनमा गर्न पाए । कहिल्यै अरुकुरा सोच्नु परेन । न त हस्त मैथुनको साहारा नै लिनुपर्यो । श्रीमान्को अनुपस्थितिमा ममा यौन चाहनानै आउँदैन । त्यसैले कुनैै विकल्प पनि सोच्नु परेन । म बाहेक कुनै पनि महिलाप्रति आकर्षित नहुनु नै मेरो श्रीमान्को सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । - धरहरा अनलाइन डट कमबाट
4/14/2018 01:16:00 PM